फेला पर्‍यो ओमिक्रोनभन्दा २० गुणा बढी संक्रामक अर्को भेरियन्ट – Health Post Nepal
फेला पर्‍यो ओमिक्रोनभन्दा २० गुणा बढी संक्रामक अर्को भेरियन्ट
२०७८ चैत २१ गते १२:१३
काठमाडौं–ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण विश्वभर कोरोनाको तेस्रो लहर आयो। यो भेरियन्ट त्यसअघिका भन्दा बढी संक्रामक मानिएको थियो। अब ओमिक्रोनभन्दा बढी संक्रामक मानिएको अर्को भेरियन्ट पाइएको छ, जसलाई ‘एक्सई’ नामले चिनिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले एक्सई भेरियन्ट ओमिक्रोन र त्यसको सब भेरियन्ट बीए.२ भन्दा २० गुणा बढी संक्रामक भएको जनाएको छ। यसले विश्वभर पुनः चिन्ता बढाएको डब्लुएचओको भनाइ छ।
कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट संक्रमण तीव्र भइरहेका मुलुकहरुले एक्सई भेरियन्टका बारेमा सतर्कता बढाइरहेका छन्। हाल युरोप र एशियाका केही मुलुकहरुमा संक्रमण दर तीव्र छ। संक्रमण बढेपछि चीनको सांघाई सहरमा दोस्रोपटक लकडाउन गरिएको छ।
के हो एक्सई भेरियन्ट?
यसलाई ओमिक्रोनको उपभेरियन्ट बीए.१ र बीए.२ को रिकम्बिनेसन स्ट्रेन मानिएको छ, जसलाई लिएर डब्लुएचओले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यो भेरियन्ट ओमिक्रोनका अन्य भेरियन्टका तुलनामा ४३ गुणा बढी तीव्र रुपमा फैलनसक्ने बताइएको छ। यद्यपि यो भेरियन्टलाई डब्लुएचओले अझै पनि ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ मानेको छैन। डब्लुएचओले यसको गम्भीरताका बारेमा अनुसन्धान जारी राखेको छ।
ओमिक्रोन भेरियन्टकै ‘एक्स डी’ नाम दिइएको अर्को उपभेरियन्ट पनि देखा परेको छ। यो नयाँ भेरियन्टको संक्रमण दरलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छैन।
कति खतरनाक छ?
विश्वभर कोरोनाको चौथो लहर देखा परिरहेको छ। विशेषगरी चीन र युरोपेली मुलृुकमा देखा परेको संक्रमणदरलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छ। यस्तोमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फेला पर्नु चिन्ताजनक विषय हो। बेलायती स्वास्थ्य निकायका मुख्य चिकित्सा सल्लाहकार सुसन हप्किन्सले कोरोना भाइरसका अन्य भेरियन्टसँग मिलेर बन्ने भेरियन्ट त्यति घातक नहुने र यो चाँडै समाप्त हुने बताएका छन्।
डब्लएचओले जारी गरेको रिपोर्टमा एक्सई भेरियन्टलाई ओमिक्रोनका अन्य भेरियन्टभन्दा बढी खतरनाक भनिएको छ। तर यसको गम्भीरता र संक्रामकताका विषयमा कुनै निस्कर्ष निस्किएको छैन।
बेलायतमा फेला परेको थियो पहिलोपटक
एक्सई भेरियन्ट गत जनवरीमा बेलायतमा फेला परेको थियो। त्यसयता हालसम्म यसका ६ सयभन्दा बढी बिरामी फेला परेका छन्। यसबाहेक फ्रान्स, डेनमार्क, बेल्जियममा पनि एक्सईका भेरियन्ट देखा परेका छन्। एक्सईको गम्भीरता एवं यसमा खोपको प्रभावकारिताका बारेमा विस्तृत अनुसन्धान बाँकी नै छन्।